Umbono Omtsha – Diocese of Saldanha Bay
Diocese of Saldanha Bay
Bishop’s Lenten Pilgrimage
Pastoral and Liturgical Pilgrimage
Umbono Omtsha IDayosisi yaseSaldanha Bay Umbono Omtsha Singabantu beDayosisi yaseSaldanha Bay
1. Thina, bantu beDayosisi yaseSaldanha Bay, asikoyiki ukuphupha siwajike loomaphupha ethu asebenze. 2. Khumbula igama lethu lamandulo, Abantu Bendlela, sihamba kwimigama engama 800km, apho sihlala khona, simanyene kwaye sibazi abamelwane bethu, nabahlala kwimigama ekude nathi. 3. Sihamba nemihlakulo yethu, iminatha yokuloba, neewayini zethu, izixhobo zokusebenza, iincwadi ezininzi namabala ekusetyenzwa kuwo: Sinee Bhayibhile zethu, iincwadi zethu zemithandazo, amaculo ethu, soloko sikuhambo, hayi abo sele befikile. 4. Sima ngokuzithemba kwisithethe esisulungekileyo se nkcubeko yethu iingcambu zethu ezinzulu nezamanyange ethu ngokwasemoyeni. Kodwa asimanga kwingcinga yezinto zexesha eladlulayo. 5. Sisoloko sibizwa nguThixo wothando osibiza njengamaqabane, usapho, nabenzi – ukuba bazise kubunye noThixo, izinto zezulu ehlabathini. 6. Kuba sibiziwe, sisebenzisa ilizwi lethu ekuthabatheni inxaxheba kwesisimemelelo kwelilizwe Okwethu kukuqhubekeka,sihambisa, Uthando olaqalwa nguThixo kuthi. A. Izifundo zethu zeNggiqo buThixo 7. Sifumene ilifa lengqiqo buThixo ejolise kuThixo nothando lukaThixo elizweni Uthando oluthetha inyaniso eyiyo kwiindawo zethu zasekuhlaleni nakwiimeko. 8. Sibambe iNgqiqo buThixo esidibanisa namabali angcwele –atyhilwe kwizibhalo ezingcwele nasebomini bethu. 9. Sifundisa iNgqiqo buThixo engenaziqinisekiso ezilula, ezingathandabuzisiyo ezingenazithembiso ezingekhoyo, Kodwa ezingomoya, ezingafihlakalanga, ezinentelekelelo, ezinokwenzeka yaye ngokukodwa ezingohambo.
Siyi – Tyalike
10. Siyi-Tyalike, ‘abantu bakaThixo’ – yazo ‘zombini necawa ekwaziyo ukuthetha kakuhle ngokungathi ichasene kwaye iyabhida; asikoyiki ukungena kwinto Engaziwayo –into engekhoyo iPasika kaThixo apho kuya kusoloko kuvuka intsasa entsha. 11. Icawa engazibongiyo ngobunganga bayo, kodwa evumayo ukuba sizisa into eyodwa elizweni inkqubela yeVangeli 12. Efikelela kuzo zonke iindawo zobomi bethu, ihlaziye ukholo lwethu, esibizayo ukuba senze ntsha kwaye sivavanye ngeli lixa sifuna ngenjongo abo baxhelekileyo, ababuthathaka nabalahlekileyo; 13. Abaziinkedama nabahlolokazi, abalityelweyo, nabangajongelwanga ntweni, abangasebenziyo, abangekho sematheni nabangakholelekiyo, 14. Abangakhathalelwanga nabangathandwayo, Abo ba chwethelwa bucala, abangenamihlaba nabaselubhacweni, abo bohluthwa ubunini babo yimbali nengcinezelo abo banamazwi aphelela emoyeni okanye alahleke kwiingxabano , zokuba nezinto okanye ukunyoluka. 15. Icawa ezibandakanya nabantu bezinye iinkolo kunye nabo bangekakholwa; indawo yokhuseleko kumzila wotshintsho, icawa ekwaphazamisa amanzi okuphumla nokwaneliseka; 16. Singabahlali apho abantu bethu abancinci nabantwana bethu bengelokamva nje lethu, kodwa besezintliziyweni zethu ngoku! 17. Sibancinci, hayi ngokwasengqondweni nasemphefumlweni kuphela – kodwa sibancinci ngokwamanani – ngako oko siyicawe apho abancinci bakhulula izihlangu zabo bazive besekhaya ngokuqgibeleleyo – apho babonwayo ze baphulaphulwe kwiindawo zethu ezingcwele nasebunkokhelini bethu; Apho bakhokhelwa baze bafundiswe, bakhuthazwe ukuba bakhokhele kwimibala nakwizandi ngokukodwa ezizezabo. 18. Kwaye singabahlali apho kuxatyiswe khona abadala nabagugileyo; Apho usapho, amaqela amancinci, namakhaya axatyiswe njengamakhakha okukhulisa nokunakekela. 19. Siyirhamente, omama, ootata, abantwana, amadoda nabafazi, abantwana abafikisayo nootitshala, abanyangi, amaqabane omnqamlezo, abaphathi nabaprofeti, ubhishophu, abapriste nabadikoni, abadala, abahlakaniphileyo, iimveku; nabangakhathaliyo; abo bakholelwa ekubeni eli lilizwe likaThixo yaye uThixo uza kwenza zonke izinto zibe ntsha. 20. Siyakhula ngobude nangobukhulu – sakha iicawe ezinomphakathi nomphandle – ezibonakalayo nezingabonakaliyo; IiCawa ezanelisayo ngokuphandle; Iindawo ezingcwele zobuhle; zabantu bazo zonke iimvaba kunye nabangenazimvaba. Okwethu kukuqhubekeka,sihambisa, Uthando olaqalwa nguThixo kuthi.
21. Imimoya yethu nenkolo yethu izaliswe ngumculo novuyo, olufumaneka kuye wonke umntu, luyabonakala yaye luyachukumisa. Luhle. Lulula. Lutyebile kwaye luthule, inkolo exhaswayo nexhaswa yimithandazo, 22. izifundo zokukhulisa ubomi bosapho nelungu ngalinye lecawa. Sithembele kwaye sinamathele kwizithethe zethu zamandulo, Isingqi sonqulo lwethu nemicangcatho yemithandazo yethu isimanya kuluntu kwilizwe ngokubanzi
Ubunkokheli bethu 23. Ubunkokheli bethu bukho kwaye buyabonakala; Senza kube lula iindaba eziyinyaniso; ubunkokheli obudibana nenyaniso yaye budibanisa abantu – buthatha ilizwi lomntu ngamnye njengelilodwa. 24. Ubunkokheli kwizinga lasekuhlaleni, emakhaya nakumaqela olutsha; kwiAtshidikonri nasezivestri, ezidibana kwaye zimamele injongo nokusebeza kukaThixo kwindawo nganye kwisidiliya sakhe Kwaye kuzo zonke ezi ndawo sibona ukuzibophelela okukhulu kuzo zonke iintlobo zokulingana, ngokukodwa ngokwesini nangobudala. 25. Ngenxa yokuba bonke abakunye nathi Ingabefundisi bemfihalakalo ezingcwele neenkokheli zeVangeli Amadikoni , abaPriste neBhishophu, Abashumayeli, iikwayala nabancedisayo, imibutho amaqela ooMama nooTata, abantu abajonge iCawa, abagcini cwangco – wonke umntu uyafuna ukuba nebango nokwenza umsebenzi wobunkokheli. 26. , Asiwoyiki umbangazwe wabumini, sima njengeenkokheli nabalandeli – sime nabanye okanye sime sodwa – simele ubulungisa, uxolelwaniso nenyaniso. Okwethu kukuqhubekeka,sihambisa, Uthando olaqalwa nguThixo kuthi.
Impawu zethu 27. Iintliziyo zethu ziyangcungcutheka kwaye zibhengeza umanyano olungamandla lomntwana ka Mariya 28. Sinobuchule, ekuthetheni ngeelwimi ezaziwayo, ngolwimi lokumanyanisa, uthando, noxolelwaniso. 29. Sifumana kwaye sichaze wonke umntu ngesipho sikaThixoizipho ezisoloko zisenziwa ntsha ngumthandazo nasekujongeni emva, ngoqeqesho nangokukhulisa. 30. Singabantu beDini lombongo nombulelo, sizinikezela njengedini eliphilayo elithunyelwa ezweni kusenziwa umsebenzi wokwenza konke, wokungciba nokuphilisa, wothando,wokuxolela nokudibanisa. 31. Sifaka izandla zethu, iingqondo zethu neentliziyo zethu emsebenzini, sisebenzisa ngobulumko, intembeko nembeko, bonke ubugcisa benzululwazi obusisipho kuthi kule nkulungwane 32. Njengemithi, etyalwe kwimihlaba eyahlukileyo, siyavuka xa siphethwe ziinkwenkwezi esizibanjelwe nguThixo. Sibahle kwaye somelele, sikhaliphile. Ibala eliluhlaza ligqibezela imizwa yethu. 33. Singababelekisi, sisebenza ngqo kwiintlungu nakwimisebenzi yokubelekisa. Sibandakanyeka kakhulu ekuzaliseni Kwiindawo ezintsha zasekuhlaleni. Ulwimi lwethu 34. Ulwimi lwethu lubandakanya zonke iilwimi yaye alicaluli ngesini, alunamabinzana entetho acalulayo, acingiweyo nazalisekisa ngokwasentliziyweni, olubonakaliswe kwiintetho nakwiinkolo zethu. 35. Sichaza uThixo ngokwemifanekiso nangezifaniso ezakudala nezangoku – UThixo azenze zafumaneka kumntu wonke – uThixo olwimi lwakhe ilulwimi lomntu wonke. Okwethu kukuqhubekeka,sihambisa, Uthando olaqalwa nguThixo kuthi.
Imizimba Yethu 36. Sijonga kumntu ngamnye sibone umfanekiso kaThixo – le mbono idubula yonke imiqobo eyimida yethu. Asiboni mJuda okanye ongenguye, ndoda okanye umfazi,nto ethe ngqo, Indoda ethandana nenye, bala, isiko elahlulayono , ngelixa sithanda yonke into eziswa ngumntu ngamnye. Xa sibona into eyabonwa nguThixo ekuqaleni kwethu, yokuba umntu ngamnye uphethe ukulunga kukaThixo – okufunyanwa kumdongwe wobomi obukhulu nobuncinci. 37. Kuzalisekiswe ngomoya ophilayo kaThixo, ngothando emizimbeni yethu, siyazi kananjalo ukuba ilungu ngalinye lomzimba wethu lixabisekile kwaye liyaziwa nguThixo owasidalayo ngelixa sasingakwazi ukuthetha singaphakathi ezibelekweni zoomama bethu. Siyayazi, ngako oko, indalo exabisekileyo yokungathethi komzimba womnye umntu. 38. Sithembe umntu ngamnye, ngokwasemzimbeni, emphefumlweni nasemoyeni, asisayi kubetha ntombazana, mfazi, nkwenkwe okanye ndoda. Okwethu kukuqhubekeka,sihambisa, Uthando olaqalwa nguThixo kuthi.
Uvakaliso lwethu 39. sineVangeli, kwaye luvakaliso lwethu kwindawo nganye, idolophu, ifama, ulwandle nesixeko,kwindawo nganye yasebumelwaneni naselokishini, kwisimokolo ngasinye nakwivenkile nganye – yokuba uThixo uluthando yaye ufuna ukwenza indlu yothando kuthi naselizweni lethu. 40. Le yimbono yethu – imbono kaThixo kuthi – yaye nokwazi ukuba akukho nto sinokuyenza ngaphandle kukaThixo, sizijulela ntsuku zonke kwiimfefe zikaThixo novuyo lokwazi ukuba uThixo ukhetha ukusebenza nabaqhelekileyo – abathembakeleyo nabantliziyo zivulekileyo, abalivayo ilizwi lobizo… “Yiza”
Copyright © 2016 Diocese of Saldanha Bay | All Rights Reserved.For church website assistance: MyChurchIT